अन्ततः पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय !
ARCHIVE » अन्ततः पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय !
काठमाडौँ - सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन विदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रकाशित राजपत्रमा पृथ्वीजयन्तीलाई सार्वजनिक बिदाको सूचीमा सामेल गरिएको छ । गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पृथ्वीजयन्तीलाई सामेल नगरी २०७४ सालको सार्वजनिक छुट्टीको सूची पेश गरेपछि मन्त्रीहरु दीपक बोहरा, अर्जुननर सिंह केसीलगायत धेरैले यसको विरोध गरेका थिए ।
मन्त्रीहरुले पृथ्वीजयन्तीमा छुट्टी नदिएसम्म सार्वजनिक छुट्टीको प्रस्ताव अनुमोदन नगर्ने अडान लिएपछि त्यसमा निर्णय हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः पृथ्वीजयन्तीको बिदालाई सार्वजनिक बिदाको सूचीमा समावेश गरी त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।